Isalamoana: Zavatra hafa ambadiky ny mody atao hoe fanonganam-panjakana
Zavatra hafa ambadiky ny mody atao hoe fanonganam-panjakana
Volana nanamarika manokana ny atao hoe fanonganam-panjakana na tsy fanonganam-panjakana ity volana avrily 2010 ity. Ahafahana mitaratra ny any ambadiky ny sehatra tsy hitan'ny besinimaro ireny zavatra hita maso na atao ho talaky maso ireny. Fitadiavana ny antony ao ambadik'ireny karazam-pihetsiketsehana ireny noho izany no ataoko eto fa tsy hianina fotsiny amin'ny hoe sarimihetsika io na sarintsariny io. Tsy ho sodokan'ny aseho ivelany aho fa mampitodika ny rehetra kosa ny fiantraikan'ilay toe-javatra sy izay tohiiny nanaraka ilay toe-javatra aroso eo anoloana.
Mety ho tsy voamarikareo tsara angamba ilay nosoratako tamin'ny faran'ity herinandro ity ihany tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Mpitarika mpamadika" teny amin'ny faramparany manao hoe :"Na dia maro aza ny zavatra tiako hosoratana toy ilay "tsy fanonganam-panjakana" dia hatreo ihany aloha ny soratana", dia saiky hanoratra aho tamin'izany fotoana izany hoe misy hatrany ireo minia manely tsaho na mamorom-baovao tsy azo hamarinina afa-tsy ireo izay mety ho nandray anjara taminy heno eny anelakela-trano eny. Noheveriko ho tsy dia maika loatra ilay hevitra nitambolona tato anatiko tato ka nahatonga ahy nampandefitra ny lahatsoratra mikasika izany. Ity sarintsarina fanonganam-panjakana nitranga tamin'ny alahady 18 avrily ity indray no nahatery ahy hambosaka izany ho anareo mpamaky hajaina.
Ny mpanara-baovao rehetra dia mety hahatadidy fa ny andron'ny zoma 2 avrily no nisy fiambenana mafy dia mafy ny Lapan'Ambohitsorohitra. Nanao fampisehoan-kery tamin'ny alalan'ny fandrantirantiana fitaovam-piadiana mahery vaika ny mpiambina ny lapa miaraka amin'ny vondron'ny FIS (Force d'Intervention Spéciale) nandritra io alina io ary nanery izay nanana fiarakodia rehetra hanala ny fananany teny amin'ny faritra Antaninarenina. Ny maro dia nihevitra fa tsy nahomby ilay fanonganam-panjakana tamin'io andro io. Izaho kosa resy lahatra fa tena nahomby tokoa ilay fanonganam-panjakana. Tsy hita mivandravandra nandritra iny faran'ny herinandro iny ilay fanonganana fa ny tohiny nandritra ny herinandro fiasana no tsikaritra fa niova ny mpitondra tenin'ny prezidansa.
Hevitra am-pitaka no natao tamin'io alina io: naseho tamin'i DJ fa tsy mitantanana na inona na inona intsony izy fa misy mikatsaka ny ainy. Voatery niafina na tsy nisehoseho vahoaka ingahy DJ nandritra ny andro maromaro. Efa voalazako any amin'ny lahatsoratra hoe hilaza izay tsy voalaza any an-kafa moa ny amin'io tsy nahitana nandritra ny fotoana maharitra ny PHAT. Nanomboka tamin'io fotoana io dia ny praiministra no lasa nitondra teny tamina filankevitry ny Minisitra fa tsy ny Sekretera Jeneralin'ny Prezidansa. Misy zavatra hafahafa ao izany! azoko heverina avy hatrany fa efa ny praiminisitra no mitantana ny baolina fa saribakoly mody arantiranty fotsiny ny PHAT. Azoko heverina miaraka amin'izany ihany koa fa nahatsinjo io fiovam-pitantanana any ambadika io ny Minisitry ny Foloalindahy tamin'izany fotoana ka mety ho nanoman-javatra na samy nanana tetika izy roalahy ireo saingy ny an'ny Praiminisitra no tonga taloha.
Tonga ny fotoana dia namoaka ny didy fandraisan'ny praiminisitra ny fitantanana ny minisiteran'ny foloalindahy ny filankevitry ny Minisitra. Ny tenan'ilay handray fitantanana no nanambara izany tamin'ny mpanao gazety, izany hoe ampahibemaso... Somary mahavariana io fa heveriko ihany koa io hoe fanonganam-panjakana hafa satria manambara na manendry ny tenany izy. Ny filazan'ny mpanolo-tsainan'ny praiminisitra, izany hoe azo heverina ho tsaho koa ity filazana ity satria tsy nivoaka ampahibemaso, no nahenoana fa nofandrihana ho any Mantasoa ingahy praiministra ary efa voaomana ny "fampamindram-pitantanana" rehetra no nisy nanao tsilia-tsofina taminy tsy hankanesana any fa "vita" izy raha mankany. Nisy namadika izany tamin'ireo mpikarakara ary azo vinaniana ihany taty aoriana hoe iza ilay nampandamoka ny raharaha. Ny tohin'io resaka Mantasoa - izay mbola azo apetraka ho tsaho satria tian'ny mpanaraka ny praiminisitra hatao toho-tsofina amin'izay akamany - io, sy ilay hoe "fifanarahana Vohipiraisana" hita an-gazety, no nahatonga ny fanapahan-kevitra maika hanalana amin'ny toerany ny minisitry ny foloalindahy.
Tonga indray ny faran'ny herinandro faharoa amin'ny volana aprily, andro sabotsy, nasaina nody avokoa izay rehetra niala voly tany amin'ny efitrano fisakafoanana sy ny toerana fialam-boly amin'ny alina teny Antaninarenina, Ambohijatovo, Analakely, Ambodifilao, Soarano, Tsaralalana... Mafy indray ny fiambenana ny Lapan'Ambohitsorohitra. Fantatsika fa tsy nanaiky hiala vetivety teo amin'ny toerany ny minisitry ny foloalindahy. Nisaraka tanteraka ihany koa ny mpitarika mirahalahy tao amin'ny FIS ka norarana tsy hahazo mankeny an-dapa intsony ny Lt-Cl Charles. Noahiahiana hamono ny PHAT manko ranamana...di anoalzainy fa hotsapainy ny herintsain'ny mpiambina ny Lapam-panjakana. Vokany: raha saiky hitafa tamin'ny mpanao gazety voafantina ny PHAT dia voatery nanemotra izany ho amin'ny fotoana hafa indray. Tsy mbola tafavoaka tamin'ny fahanginany noho izany ingahikely. Hatreto mbola tsy miova ny tena mpitantana ny firenena any ambadiky ny sehatra any. Niezaka izy ny hampijoro ny maha-PHAT lohan'ny firenena azy saingy nandamoka aloha izany, toy ny tsy afa-mihetsika hatrany izy noho izany.
Tao anatin'ny herinandro fotoam-piasana andavanandro ranamana vao afa-nitafa tamin'ny mpanao gazety hilaza indray ny hisian'ny fifampidihana eo amin'ny ankolafy. Tafavoakany ilay fitenenana saingy ho tanterany ve izany? Ao anatin'ny fotoana fiandrasana ny andro voatondro hihaonana indrindra isika amin'izao fotoana izao. Mazava loatra raha be no niteny hoe fanavotana farany ho azy io hampiverenana azy ho tena 'Filoha' tokoa fa tsy sarintsariny intsony. Be sahady anefa ny toe-javatra efa mintranga mandra-pahatonga izany fotoana izany ka ny tanjon'ireny toe-javatra ireny dia ny tsy handehanany any amin'izany fihaonana izany mihitsy. Mazava loatra manko fa hiharihary avokoa ny halatra nataon'ny sasany dia tadiavina ny fomba rehetra hanakanana ny famahana ny krizy mihatra amin'ny firenena. Tsy raharahiany izay hizoran'ny firenena fa ny mitavana ny harem-pirenena na ny haren'ny hafa no mahafinaritra azy.
Indro isika fa naheno hoe nisy nanapoaka grenady ny tobin-dasantsy teny Tsiazotafo, dia injao ihany koa fa vao niampita ny faran'ny herinandro fahatelo amin'ny volana isika izao dia heno indray ny 'fanonganam-panjakana fahatelo' nandamoka tao anatin'ny volana. Tiana nasongadina indray fa ny Lapan'ny Praiminisitra no saiky hotafihana voalohany, dia toy ny nanaraka mivantana sy nahalala ny zavamisy haingana dia haingana ny televiziona roa akaiky ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Hita an-dahatsary ny fiavin'ny olona hosamborina... satria tsy nisy nampita tamin'izy ireo hoe "nandamoka" ny hetsika natao. Ny tena vonona amin-javatra sarotra tahaka itony dia manendry olona hanara-maso izay olona hanao ny "asa" fa tsy ho mora sambontsamborina vetivety izany. Mariho tsara fa raha niezaka ny mba hiseho vahoaka ingahikely dia mody iharan'ny fanonganana ny ao amin'ny Primatiora miaraka amin'ny lazaina fa saika hanafihana ny Lapan'Iavoloha sy Ambohitsorohitra ary ny any an-tranon'ny PHAT araka ny nolazaina. Fijeriko dia mibaribary fa te-hisongadina mihoatra noho ny PHAT eo imasom-bahoaka ny Praiminisitra fa tsy hionona intsony ho mpitantana manontolo ny firenena any antakonana any. Mbola hiandry ny faran'ny herinandro fahaefatra ve hampibaribary izany? Ka amin'io faran'ny herinandro io anie no voatondro hanaovana ny fihaonana e!
Noho izany, tsy hoe fanakanana azy tsy handeha ihany no tanjona amin'ireo toe-javatra avelany ho hitantsika fa efa misy tosika mihitsy any ho any hanova amin'ny fomba hafa kokoa ny fitantanana ny firenena. Ho tahaka ny ahoana ilay famindram-pahefana (fa tsy fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny basy aman-tafondro)? Tsy voatery ho araka ny antenain'ny ankolafy telo loatra anefa izay hitranga eo. Politika fanorona hafa indray no atrehintsika sady tsy voatery hiankina velively amin'ilay mety ho fihaonana izany tetika hitakitako rehetra izany. Na izany na tsy izany dia hiarahantsika mijery ny tohin'ny raharaha...
jentilisa, 19 avrily 2010 amin'ny 01:00 maraina ora Antananarivo
Nosoratan'i jentilisa tamin'ny 1:06 AM